(အလက်ဇန်ဒရိုဗိုလတာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အလက်ဇန်ဒရို ဗော်လ်တာ (အင်္ဂလိပ် : Alexandro Volta) ကို အီတလီနိုင်ငံ လောင်ဗာဒီဒေသ၊ ကိုမိုမြို့တွင် ၁၇၄၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏မူရင်းနာမည်အပြည့်အစုံမှာ အလွန်ရှည်လျားသည်။ နာမည်အပြည့်အစုံမှာ "အလက်ဇန်ဒရို ဂူဆက်ပီ အင်တိုနီယို အနာတာဆီယိုဗော်လ်တာ" (Alessando Giuseppe Antonio Anastasio Volta) ဖြစ်သည်။ ဗော်လ်တာသည်အလွန်ထူးဆန်းသော လူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဗော်လ်တာသည် အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်အထိ စကားမပ​ြောတတ်ပေ။ ထို့ပြင် စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရလည်း လွန်စွာပျော့ညံ့သည်။ မိတ်ဆွေများလည်းရှိခဲ့သည်။ ဗော်လ်တာသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှု၊ မကျေနပ်မှုများရောထွေးခံစားခဲ့ရသည်။ ဗော်လ်တာသည် ခုနစ်နှစ်သားအရွယ်တွင် တခြားကလေးကြီးများ၏ ကျောင်းစာအရသော်လည်းကောင်း၊ ပညာဉာဏ်အရ တိုင်းတာစစ်ဆေးပြီး သူတို့ထက်သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
၁၇၇၆-၁၇၇၇ ခုနှစ်တွင် ဗော်လ်တာသည် ဓာတ်ငွေ့များ၏ ဓာတုဖြစ်စဉ်ကို အသေးစိတ် စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ဗော်လ်တာသည် မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ကို စတင်တွေ့ရှိဖော်ထုတ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ အလုံပိတ်အတွင်းပိုင်း၌ လျှပ်စစ်မီးပွင့်စေသဖြင့် ဓာတ်ငွေ့မီးစွဲလောင်ဖြစ်စဉ် သဘောတရားကိုလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၇၇၉ ခုနှစ်တွင် သူသည် ပါဗီယာတက္ကသိုလ်၌ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာရူပဗေဒပါမောက္ခ ဖြစ်လာသည်။ ဗော်လ်တာသည် ပါဗီယာတက္ကသိုလ်၌ နှစ်ပေါင်း ၄၀ နီးပါးကြာရှည်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၇၉၄ ခုနှစ်တွင် ဗော်လ်တာသည် ပါရီဂရီနီ၏သမီး ထရေဇာနှင့် လက်ထပ်ပြီး သားသုံးယောက်ထွန်းထားခဲ့သည်။ သူ့သားသုံးယောက်သည် ဖခင် တီထွင်စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ဗော်လ်တစ်ပိုင်းကို အဆုံးတိုင်ဆက်လက် သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဂါလ်ဗာနီ၏ လျှပ်စစ်တုံ့ပြန်မှု သဘာဝတရားကို ဆန့်ကျင်ပြီး လူဂီဂါလ်ဘာနီ၏ အယူအဆကို ဗော်လ်တာက ထောက်ခံခဲ့သည်။ ဗော်လ်တစ်ပိုင်းဟု အမည်ခံသော ရှေ့ဦးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်တိုးတက် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဗော်လ်တစ်ပိုင်းဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်သိုလှောင်ရာဘက်ထရီ၏ ရှေ့ပြေးသဘောတရား လုပ်ငန်းလက်တွေ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီသည်ပုံမှန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဗော်လ်တာ၏ပြုလုပ်ချက်မှာ မျိုးမတူသော သတ္တုပြားတစုံ (နှစ်ပြား) ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးစေသည်။ ယင်းနှစ်ပြားမှာ သွပ်နှင့် ငွေတို့ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြသည့်အနေဖြင့် ဗော်လ်တာသည် ခွက်နှစ်ခုထဲတွင် ရေငန်များထည့်ထားပြီး နှုတ်သီးခေါင်းတစ်ခုစီ တပ်ထားသည်။ မျိုးမတူသော အီလက်ထရုတ်နှစ်ခုကို ရေငန်တွင်နှစ်ထားလိုက်သည်။ ဗော်လ်တာသည် ၁၈၁၉ ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူလိုက်သည်။ အငြိမ်းစားယူစဉ် သူသည် စပိန်နိုင်ငံမှာရှိနေသည်။ ဗော်လ်တာသည် ၁၈၂၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အီတလီနိုင်ငံ ကိုမိုမြို့မှာပင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဗော်လ်တာ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ထိုမြို့မှာပင် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။
၁၇၇၆-၁၇၇၇ နှစ်များတွင် ဗိုလတာသည် ဓာတ်ငွေ့တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ဓာတုဗေဒ ပညာရပ်ကို ဆည်းပူးခဲ့သည်။ စိမ့်မြေ တို့မှ ဓာတ်ငွေ့များကို စုဆောင်းလေ့လာရင်းမှ မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ (သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့) ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုနောက် မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ကို လျှပ်စစ်မီးပွားများနှင့် မီးရှို့စမ်းသပ်သည့် စမ်းသပ်မှုကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လျှပ်သိုခြင်း (Capacitance) ကိုလည်း လေ့လာခဲ့သည်။ ဗိုလတာသည် ပိုတင်ရှယ်ခြားနားခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင်အမှုန်များ၏ ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းကို ဗိုလတာ၏လျှပ်သိုမှု ဥပဒေသ (Volta 's Law of capacitance) ဟုခေါ်သည်။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပိုတင်ရှယ်ခြားနားခြင်း၏ ယူနစ်ကို ဗို့ ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ၁၇၇၉တွင် ပါဗီးယားတက္ကသိုလ် စမ်းသပ်လေ့လာဆဲ ရူပဗေဒဌာန တွင် ပါမောက္ခ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုရာထူးဖြင့်ပင် ၂၅နှစ်နီးပါး အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် အနွယ်တော်ထဲမှ ထရီစာပါရီဂရီနီ အမည်ရှိမိန်းကလေး တစ်ဦးနှင့် ၁၇၉၄တွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည်။ သား ၃ဦးထွန်းကားခဲ့သည်။
လျူဂီဂယ်လ်ဗနီ သည် ဖားတစ်ကောင်၏ ခြေထောက်တစ်ဘက်တစ်ချက်စီတွင်မျိုးမတူသော သတ္တဳ များကို တန်းဆက်ချိတ်ဆွဲစေခြင်းဖြင့် သတ္တဝါလျှပ်စစ် (Animal Electricity) ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းစမ်းသပ်မှုတွင် ဖား၏ခြေထောက်သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဗိုလတာ သတိထားမိသည်။ ထို့နောက် ဗိုလတာသည် ဖား၏ခြေထောက်တွင် ဆားရည်စိမ်ထားသော စက္ကဴ ကိုကပ်ကာ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့လေ့လာစူးစမ်းမှုကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ အပါအဝင် ဂယ်လ်ဗနစ်ဆဲလ် (Galvanic Cell) ၏ Electromotive Force (emf) အစရှိသည်တို့ကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
ဂယ်လ်ဗနစ်ဆဲလ် မျိုးမတူသော သတ္တဳ လျှပ်ခေါင်း နှစ်ခုပါဝင်၍ ၎င်းတို့ကို လျှပ်လိုက်ရည်ဖြင့် ခွဲခြားထားပါသည်။ ၎င်းကို ဗိုလတာ၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ နိယာမ ဟုခေါ်သည်။ Zn-Cu galvanic cell ဟူသောပုံကိုကြည့်ပါ။ ၁၈ဝဝခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးသော ဓာတ်ခဲနှင့်တူသည့် ဘက်ထရီတစ်မျိုးဖြစ်သော ဗိုလတာအစ်ပိုင်လ် ခေါ် Voltaic Pile ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်သော လျှပ်စီးကြောင်း ကိုထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဗိုလတာသည် ဓာတ်အိုးများပြုလုပ်ရာတွင် မတူညီသော သတ္တဳလျှပ်ခေါင်း နှစ်ခုကိုအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ရာ ထို သတ္တဳ သည် ငွေ (Silver) နှင့် သွပ် (Zinc) တို့သည် အကောင်းဆုံးသော သတ္တဳ များပင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။
ဗိုလတာသည် အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် အဝေးမှနေ၍ လှမ်း၍ ပစ်နိုင်သော ပစ္စတို သေနတ်ကိုလည်းတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ Leyden jar ခေါ်ကိရိယာ တစ်မျိုးမှနေ၍ လျှပ်စီးကြောင်းကို ကိုဘိုမှမီလန်မြို့သို့ ဝါယာကြိုးဖြင့်ပေးပို့ကာ သေနတ်မောင်းကိုဖြုတ်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ မြေကြီးနှင့်ဝါယာကြိုးကြား လျှပ်ကာပစ္စည်း အဖြစ် သစ်သားပြားများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့အသုံးပြုသည့် စနစ်သည် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး၏ ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ ဗိုလတာတီထွင်ခဲ့သော ဘက်ထရီသည်လည်း ကမ္ဘာ႕ ပထမဆုံးသော လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ ဓာတ်အိုး (ဘက်ထရီ) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်လျှပ်ခေါင်းနှစ်ခုပါဝင်သည့်အနက် တစ်ခုမှာ သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍ တစ်ခုမှာ ကြေးနီ (Copper) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ လျှပ်လိုက်ရည်မှာ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် သော်၎င်း၊ဆားနှင့်ရေသော်၎င်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လျှပ်လိုက်ရည်သည် 2H+ နှင့် SO42− အနေအထားနှင့်တည်ရှိနေပါသည်။
ကြေးနီသည်ထိုဓာတ်ပြုမှု များတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိချေ။ ကြေးနီသည် ဓာတ်ပြုမှုဖြစ်ပေါ်စေရန် လျှပ်ခေါင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရုံမျှသက်သက်သာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းဓာတ်အိုးတွင်အားနည်းချက်များရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်၊ အပျော့စားပင်ဖြစ်နေစေကာမူ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ရန် လွန်စွာခက်ခဲပြီး၊ အန္တရာယ် လွန်စွာများပါသည်။ ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သည် ထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိသောကြောင့် ပိုစွန်းဖြစ်ခြင်း (Polarization) ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Munro, John (1902). Pioneers of Electricity; Or, Short Lives of the Great Electricians. London: The Religious Tract Society, 89–102။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အလက်ဇန်ဒရို_ဗို့လတာ&oldid=470145" မှ ရယူရန်
၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၄:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၄:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။